War; Deg Ah Guddoomiyihii degaanka leego oo qarax lagu dilay - Wardeeq 24 TV War; Deg Ah Guddoomiyihii degaanka leego oo qarax lagu dilay Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka War; Deg Ah Guddoomiyihii degaanka leego oo qarax lagu dilay
War; Deg Ah Guddoomiyihii degaanka leego oo qarax lagu dilay
Alle ha u Naxariistee Guddoomiyihii degaanka leego oo lagu Magacaabi jiray Xasan Gucdur uu u geeriyooday qarax loogu xiray Gaarigiisa, waxaana ku dhaawacmay qaraxaas laba askari oo kamid ahaa ilaaladiisa.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa ka tacsiyadeeyay dilka Guddoomiyihii degaanka leego, waxaana weli dilkaasi si cad uga hadlin mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose. wardeeq news
Previous articleCiidamo militari ah oo kasoo horjeestay mudo kororsiga Farmaajo iyo xaalada Muqdisho oo kacsan